Maalinta: Sebtember 14, 2018
Xilliga dayrta ee loogu talagalay mashiinka telefishinka ee Bursa
Turkey ayaa Uludag by baabuur cable noqon doona digniin u yimid mid ka mid ah xarumaha dalxiiska jiilaalka muhiim ugu ah iyo dabeecadda. Iyada oo lagu xerayo 140, 500 wuxuu qaadi karaa kumanaan rakaab ah saacaddii, iyadoo masaafada 9 ay tahay tan ugu dheer adduunka [More ...]
XIDHIM 2018 10-12 waxaa la qaban doonaa bisha Oktoobar
İSNERSE 2018, 4.International Rail Systems Systems Engineering Symposium 10-12 waxaa lagu qaban doonaa inta u dhexeysa Oktoobar 2018 Jaamacadda Karabuk. In ka badan waraaqaha sayniska ah ee loo yaqaan '120' ayaa lagu soo bandhigi doonaa dood-cilmiyeedka. [More ...]
Saldhigyada Cimilada Casriga ee Dhageysiga Taksiga ee Malatya
Duqa Magaalada Polat: için Si kor loogu qaado heerka nolosha ee ganacsatadayada, waxaan tagnaa taksiyooyinkayaga Malatya, kuwaas oo ku habboon bilicda magaalada, oo waxaan u qoondeynaynaa ganacsatada taksiga darawallada ah ” [More ...]
Laynka Gaadiidka Cusub ee Cusub Waxbarashada Cusub ee Sakarya
Kuxigeenka Xoghayaha guud Cali Oktar ayaa sharraxaad ka bixiyay qaban-qaabada lagu sameynayo gaadiidka dadweynaha sababta oo ah furitaanka iskuulada: 4K ka Yenikent [More ...]
Gaadiidka ugu dambeeyay ee Gaadiidka aan rasmiga ahayn ee Kayseri
Duqa Magaalada Magaalada Kayseri Mustafa Celik, Kocasinan Boulevard Danube iyo 30 August Agoosto Multi-Storey Junction ayaa la helay. Duqa magaalada Mustafa Celik, maalgashiga goobta ee qaybaha kala duwan ee magaalada ayaa wali sii wada baaritaanka. madaxa [More ...]
3. Shaqaalaha Madaarka Shaqo Laaweeynta
Shaqaalaha dhismaha garoonka diyaaradaha ee 3 waxay shaqo ka bilaabeen 06.30 aroortii sababtoo ah sariirta, boodada, qado, xaaladaha shaqo ee xun. Shaqaalaha garoonka diyaaradaha 3 wuxuu sheegtey in labo qof la dilo maalin kasta. [More ...]
Saacadaha Shaqada ee Magaaladda Marka loo eego Gobollada: Helitaanka habboonaanta muwaadiniinta, wadooyinka tareenka ee higsanaya inay yareeyaan taraafikada magaalooyinka waxay dardar geliyaan gaadiidka. Saacadaha shaqada ee mitroogu waa kuwa ugu xiisaha badan iyo [More ...]
Jaangooyo cusub iyo Badbaadada Cusub ee Nazilli
Dhismaha wadada 59 / 1 ee xaafada Aydoğdu oo ay soo agaasintay Wasaaradda Naafada ee Nazilli ee Degmooyinka Sayniska waxaana ku dhameeyay 17 waqti gaaban sida iftiinka iyo tareennada ayaa loo furay taraafikada. Qiyaastii 27 mitir [More ...]
Xarunta Wicitaanka ee BURULAŞ
Waxaan si fiican u xasuusanaanta sannadihii ay taleefannada xarunta wicitaannada ee hay'adaha dowliga ah iyo urrurada kaladuwan daqiiqado u ahayeen. Xaqiiqdii, wicitaanka badanaa ka careysiiya codka sarkaalka ka tagay taleefanka gacanta taleefanka ayaa furan [More ...]
Mashruuca Channel Istanbul ee Rafa ayaa Kordhin?
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, qabtay ee Hotel Grand Ankara Turkey mihnadlayaasha iyo farsamayaqaanno Confederation (TESK) 20. Wuxuu khudbad ka jeediyay shalay Golaha guud ee caadiga ah. Madaxweyne Erdoğan sidoo kale aad ayuu muhiim ugu yahay maalgashiga [More ...]
Tareenka Nostalgic ee wadada ku yaala ee Düzce
Tareenka, wuxuu ku socdaa Duzce mar mar daqiiqad walba, wuxuu ku qasbanaaday inuu sugo nus saac sababta oo ah inuu ku istaago wadada lugeynaya darawalka xasiloonida inta uu socdo. Xariiq gogol [More ...]
3 oo ka socda tababaraha Jawaab siinta Magaca Doodda Maddaarka
Murashaxa Duqa Magaalada CHP Mezitli Sinan Koç wuxuu si adag uga falceliyay sheegashada ah in garoonka diyaaradaha cusub la siin doono magaca Abdülhamit Han halkii uu Atatürk ka heli lahaa. Sinan Koç, “Kuma ama Mustafa Kemal Atatürk [More ...]
RayHaber 14.09.2018 Warbixinta Shirka
Mashruuca Mashruuca Mashruuca ee Diyaarinta Mashruuca Codsiga Goobta Badbeyli